Should the Black Caps tour Zimbabwe? - NZ Herald
Should the Black Caps tour Zimbabwe?
17 Feb, 2009 12:42 AM Quick Read
New Zealand Cricket (NZC) has postponed its tour of Zimbabwe by a year.
NZC and Zimbabwe Cricket (ZC) agreed to postpone the tour, which was due to take place this July following discussions at an International Cricket Council (ICC) meeting in Johannesburg this week.
Should the Black Caps tour Zimbabwe? Here is the latest selection of Your Views:
Cricket: McCullum safe at the top - for now
16 Feb, 2009 08:57 PM Quick Read
Many reasons to can Zimbabwe cricket tour - Key
16 Feb, 2009 10:14 PM Quick Read
Cricket: Five reasons why India are so good
19 Feb, 2009 03:00 PM Quick Read
<i>Brian Rudman</i>: 'Poor' cricket can afford to take stand
24 Feb, 2009 03:00 PM Quick Read
22 Sep, 2021 04:10 AM 6 minutes to read